ကောင်းကင်ဖြူ: မိုင်တိုင် ၂၉
Posted by မောင်ဘုန်း at 12:06 PM
Anonymous July 28, 2012 at 7:53 PM
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ မွေးနေ့ လေ ဖြစ်ပါစေ ... ။
ချစ်သော ကောင်းကင်ဖြူနဲ့လည်း အမြန်ဆုံးနီးပါစေ ... ။
AH July 28, 2012 at 8:47 PM
မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ ခင်ဗျာ... တစ်နေ့နေ့တော့ ကျွန်တော်လည်း အကို့လိုပဲ နွေးထွေးလှတဲ့ မိဘရိပ်ကို ပြန်လည် တိုးဝင်ချင်ပါဘိ..
KKP July 28, 2012 at 9:51 PM
ပျော်ရွင်ခြင်းအတိနဲ. ပြည့်စုံတဲ့ မွေးနေ.လေးဖြစ်ပါစေနော်...။
ဒီနေ. ဒီရက်မှ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်တိုင် 'ကို' ချစ်တဲ့ သူတွေနဲ.တူတူ စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းဖြင့် ဘ၀ကို ပျော်ရွင်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို. ဘုရားမှာ တောင်းဆု ချွေပေးလိုက်တယ်နော်...။
စံပယ်ချို July 28, 2012 at 11:37 PM
ချစ်ရပါသော ချယ်ရီဖြူနဲ့လဲ အမြန်ဆုံးနီးပြီး
မြတ်ပန်းနွယ် (Myat Pan Nwe) July 29, 2012 at 12:51 AM
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ မွေးနေ့မင်္ဂလာလေး ဖြစ်ပါစေရှင်။
ဆန္ဒနဲ့ ဘဝ ထပ်တူကျပါစေ လို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပါတယ် ..
mstint July 29, 2012 at 5:37 PM
ပျော်ရွှင်ဖွယ် မွေးနေ့မင်္ဂလာရက်မြတ်လေးပါ မောင်ဘုန်းရေ။မွေးနေ့အတွက်ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်စပ်ပေးချင်တဲ့စိတ်ရှိခဲ့ပေမယ့် မစပ်တတ်လို့ ဒေသနာတော်လေးတစ်ပိုဒ်လက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်နော်း)
"မိမိကိုယ်သာလျှင် အားကိုးရာ အမှန်ဖြစ်ကြောင်း ဒေသနာတော်"
'ကုမာရကဿပမယ်တော်သည် မိမိ၏ သားအား ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် သားအားအစဉ်တွေ့လိုသည်ဖြစ်၍ တရားကိုပင် အားမထုတ်နိုင်ဘဲ သားကိုတွေ့မြင်နိုင်ရန် တောင့်တလျက်ရှိ၏။ ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားက ဒုက္ခခပ်သိမ်းမှ ကင်းငြိမ်းရန် အလို့ငှာ သားကိုပင် အားကိုး၍ ရနိုင်မည်မဟုတ်၊ မိမိကိုယ်ကို မိမိအားကိုး၍ ဝိပဿနာ ပွားများမှာသာလျှင် နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း တရားပြသဖြင့် ကုမာရကဿပမယ်တော်သည် တရားရ၍ အရဟတ္တဖိုလ်သို့ ရောက်၏။ ထို့ကြောင့် အထက်ပါ ဒေသနာတော်ကို မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏'
ချစ်စံအိမ် July 29, 2012 at 7:39 PM
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် July 29, 2012 at 10:00 PM
မွေးနေ့လေးမှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ မောင်ဘုန်းရေ
blackroze July 30, 2012 at 11:47 AM
Maribel Artaste July 31, 2012 at 10:16 AM
အိမ်မက်ကောင်းကင် August 3, 2012 at 11:18 PM
ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါစေနော် .....
san htun August 5, 2012 at 10:48 AM
ပျော်ရွှင်ဖွယ် မွေးနေ့ လေး ဖြစ်ပါစေ...
Thameesan August 11, 2012 at 10:34 AM
လက်ဆောင်တော့မပါလာဘူး ဟဲဟဲး)